IGuadalest, idolophu ephupha kwiphondo laseAlicante | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 28/03/2021 15:30 | Indawo yokubaleka, España
IGuadalest yenye yeedolophu ezizodwa kwaye zintle Iphondo laseAlicante. Ime kwingingqi ye UMarina Baja, elikomkhulu lalo Imvelaphi, kodwa ayinalo unxweme. Ngokuchasene noko, ibekwe endulini kwaye ijikelezwe zezona ndawo ziphakamileyo zibalulekileyo kwindawo enje ISierra de Aitana Amaza ka iXortà.
Ixeliwe Ikhomputha yezeMbali ngo-1974, iGuadalest ikwayinxalenye yenethiwekhi ye Ezona dolophu zintle eSpain. Ukulawulwa yinqaba yayo entle, ukuhamba kwizitrato zayo ezimxinwa zezindlu ezimhlophe kunye nokutyelela iimyuziyam zayo kuya kukunika amava awodwa. Ukuba ufuna ukwazi ngcono ICastell de Guadalest, njengoko le dolophu ibizwa njalo, siyakukhuthaza ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Yintoni ongayibona eGuadalest
1.1 Inqaba yaseGuadalest
1.2 Icawa yoMama wethu woNyuko
1.3 Indlu kaOrduña
1.5 Imyuziyam yaseGuadalest
2 Kufuneka wenze ntoni kwidolophu yaseAlicante
3 Yintoni oza kuyitya eGuadalest
4 Ufika njani edolophini
5 Leliphi elona xesha lilungileyo lokundwendwela iGuadalest
Yintoni ongayibona eGuadalest
Ngaphandle kokonwabela izimvo ezinomdla ezenziwa yiyo iimbonoEGuadalest unelifa elinomdla kunye nelungelo lokwenza eminye imisebenzi. Siza kukubonisa into oza kuyibona kwidolophu yaseAlicante.
Kwabizwa kwakhona Inqaba yase san jose, yinqaba endala yamaSilamsi yenkulungwane ye-XNUMX. Ukuhlala kwindawo ephezulu yedolophu, bekubaluleke kakhulu kubuchule ngexesha lamaXesha Aphakathi. Nangona kunjalo, iinyikima ezimbini kunye neengxabano ezinje ngeMfazwe yenkululeko zabangela imeko yayo yangoku, phantse yaba ngamabhodlo. Nangona kunjalo, usenokutyelela amathambo akhe.
Icawa yoMama wethu woNyuko
Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX emva kwemigaqo ye baroqueIkwafumene umonakalo owanyanzela ukuyibuyisela ngo-1962 isusa i-cupola kunye ne-transept yayo. Ngaphakathi zibalaselisa ezixabisekileyo iqhekeza yenziwe ngumenzi wekhabhinethi UJose Maria Moya nomzobi UDavid Pastor. Njengoko igama lecawa libonisa, limela i-Annunciation kunye nobomi bukaYesu Krestu.
Sesona sakhiwo siphambili saseGuadalest. Yakhiwa emva kwenyikima yonyaka we-1644 kwaye ibizwa ngegama losapho lakwa-Orduña, elalilawula idolophu iminyaka engamakhulu amathathu. Kungoku nje ikomkhulu leefayile ze- UMyuziyam kamasipala Ibonisa ifanitshala yenkulungwane ye-XNUMX, imizobo yenkulungwane ye-XNUMX, ingqokelela yodongwe, iimephu, iifoto zeediliya nezinye izinto ezininzi.
Okumangalisayo kukuba, kumgangatho ophantsi weHolo yeDolophu yaseGuadalest ungandwendwela nentolongo yakudala ye-XNUMX ekhokelela ekubeni sikuxelele malunga neemyuziyam zalapha ekhaya kuba kukho enye ezinikele ngqo kwizixhobo zokuhlukumeza zamaxesha aphakathi.
Kunye nobuhle obukhulu beli dolophu iAlicante, uya kumangaliswa sisixa iimyuziyam ezinomdla wanikela undwendwe. Sele sichazile Imbali yexesha eliphakathi, kunye nezinto zayo eziphazamisayo zokuthuthumbisa kunye nezo zeCasa Orduña. Kodwa kukho ezinye ezimangalisa ngakumbi.
Yimeko ye imyuziyam encinci, apho ungabona khona izithonjana ezimangalisayo. Umzekelo, Goya's 'Ukuphunyezwa kuka-Meyi ezimbini' kwingqolowa yelayisi, inkunzi yenkomo eyakhiwe entlokweni yesikhonkwane okanye iSitampu soKhuseleko ngaphakathi kwamehlo enaliti. Zonke ziyindalo yegcisa UManuel Ussá, ithathwa njengeyona microminiaturists ibalaseleyo emhlabeni.
Akukho nto ingaphantsi kokwazi i Imyuziyam yaseBhetelehem kunye neeDola apho ungabona khona izinto zokudlala ezininzi ezindala kunye nomfanekiso wokuzalwa kwendalo. Kwaye kunokutshiwo okufanayo Imyuziyam yetyuwa kunye nepepper shaker, Eziqulathe ngaphezulu kwamashumi amabini amawaka amaqhekeza, amanye kuwo avela kwiminyaka eyi-1800 eyadlulayo.
Kwelinye icala, intle ngokulinganayo Imyuziyam ye-Ethnographic, ebuyisa ubomi babemi bentlambo yaseGuadalest ngaphambili. Isinxibo esiqhelekileyo, ifanitshala kunye nezinto ezisetyenziswa mihla le zenza izinto ezibonisiweyo kule ndawo.
Ngaphakathi kwindlu ka-Orduña
Gqi beleni, i Ingqokelela yemyuziyam yeZithuthi zeMbali Ibonisa izithuthuthu ezili-140 kunye neemoto zeediliya kwigumbi elihle. Uyakufumana apha ezinye izinto ezininzi zexa elidlulileyo ezinje ngoomatshini bokuthunga, iifowuni, iiradiyo kunye nabenzi bekofu.
Kufuneka wenze ntoni kwidolophu yaseAlicante
Ukongeza ekutyeleleni izikhumbuzo kunye neemyuziyam, iAlicante idolophu yindawo efanelekileyo ukuhamba ngeenyawo. Iindlela ezininzi ziqala kwizitrato zayo. Umzekelo, lowo uya phezulu Ingqungquthela yaseXortà Ukudlula eCerro de los Parados. Okanye leyo ikhokelela UCastell de Castell.
Zombini ezi ndlela zabelana ngohambo kude kube ILoma del Blocón, kodwa emva koko umntu uye ku Umthombo weYew, ngelixa elinye lifikelela kule Castell de Castell esele ikhankanyiwe, apho ungabona khona Indawo yeArcs kunye nemizobo yomqolomba IPla de Petracos.
Yintoni oza kuyitya eGuadalest
Emva kwezi ndlela zintaba zinkulu, umdla wakho wokutya uya kube usebenzile. Kwidolophu yoLuntu lwaseValencian uneendawo zokutyela ezikunika izitya eziqhelekileyo.
Ezinye zazo zezi irayisi kunye neetheniphu kunye neembotyi, i iipepile ezifakiwe, i umvundla ali oli kunye Imifuno ebhaka. Inamandla ngakumbi olleta de blat, enengqolowa, ihagu, iitapile, amatswele, iitumato, ameva kunye neembotyi, zonke ziphekwe ngembiza yesintu.
Ngenxalenye yalo, i mincho luhlobo lwepizza olunemifuno, iintlanzi kunye neepilele, ngelixa iibhola zombona ziyafana neebhola zenyama, nangona zingenayo inyama kodwa iitapile eziphekiweyo, isonka kunye namaqanda.
Ufika njani edolophini
Nangona kukho ifayile ye- Umgca webhasi efikelela kwidolophu yaseAlicante, eyona ndlela yokuya apho yimoto. Ukuba uhamba ukusuka I-Benidorm okanye ukusuka eAlcoy naseCocentaina, indlela ekufuneka uyenzile yile I-CV-70. Kwelinye icala, ukuba usuka eAltea, eyona ndlela iyiyo yeyona I-CV-755.
Leliphi elona xesha lilungileyo lokundwendwela iGuadalest
Indawo yaseGuadalest inemozulu ye IMeditera, ngobusika obumnene nehlobo elishushu. Nangona kunjalo, kuba idolophu iphakame kangangeemitha ezimakhulu mathandathu kwaye ijikelezwe ziintaba, imozulu yahlukile kancinci. Ke, ubusika bayo buyabanda kwaye ihlobo lithandeka ngakumbi ngobushushu.
Ke elona xesha lilungileyo lokuba undwendwele iGuadalest yile El verano. Ukongeza, phakathi ku-Agasti zabo imithendeleko imbeko ku Intombi enyulu yonyuko, apho idolophu iphila ngakumbi.
Ekugqibeleni, Guadalest Kuninzi ekunokukunika. Yidolophu entle ethe nca eweni kwaye ilawulwa yinqaba yayo kwaye inemyuziyam enomdla kakhulu kunye neendawo ezimangalisayo zomhlaba. Ukuba kuko konke oku wongeza i-gastronomy, uya kuba nazo zonke izinto eziza kukwenza utyelelo lwakho lube lolumangalisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Indawo yokubaleka » Guadalest
Imvelaphi yomlambo iMundo